Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka? - InfoFinland
Nolosha Finland > Xaaladaha dhibka > Dhibaatooyinka Ogolaansha deganaanshaha > Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?
Haddii aad haysato ogolaanshaha joogitaanka wakhtiga cayiman ee Finland xaaladdaada nololeedna ay isbeddesho, waxay saamayn ku yeelan kartaa ogolaanshaha joogitaankaada. Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan xaaladaha guud ee aad ogolaanshaha joogitaanka ku weyn karto.
Kala laabashada ogolaanshaha joogitaanka
Haddii aad dibadda u guurto
Haddii guurku ama xiriirka lamaanaha diiwaangashay uu dhamaado
Haddii aad shaqada weyso
Ka masaafurinta dalka
Hay’adda socdaalku waxay samaysay isbeddello dhowr ah oo ku saabsan codsashada sharciga deganaanshaha. Wakhtiyada iscaddaynta waa la dheereeyay sharciyada siisocdana waxaa lagu dabbaqayaa waxyaabaha la fududeeyay qaarkood. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta fayruska Korona ku yeeshay sharciga deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.
Ogolaanshiyahaada joogitaanka waqtiga cayiman ama joogtada ah waa lagaa ceshan karaa, haddii
aad Finland joogto uga guurto
aad dibadda si xariir ah u joogtay laba sano
Ogolaanshiyahaada joogitaanka waqtiga cayiman ama joogtada ah waa lagaa ceshan karaa xitaa, haddii
aad macluumaadyo been ah dhiibtay markii aad ogolaanshiyaha codsaneysay
aad qarisay arrin ka hortagi laheyn ogolaanshiyaha joogitaanka
ay dowlad kale oo Schengen ah Finland ka codsato in lagaa ceshado ogolaanshiyaha joogitaanka ee lagu siiyay
Ogolaanshiyaha joogitaanka ee waqtiga cayiman waa lala laaban karaa haddii sidoo kale sababihii lagu bixiyay aysan sii jirin. Ku daro xisaabta, in xaaladaha qaarkood marka ay jiraan ay qasab kugu tahay in aad heysato dakhli kugu filan oo aad Finland kula noolaato. Bogagga Xafiiska dal u soo guurista ayaad ka hubsan kartaa, cadadda dakhliga la iska rabo iyo qofka laga rabo.
Ogolaanshiyaha joogitaanka ee waqtiga cayiman waa la laaban kara Xafiiska dal u soo guurista.
Haddii aad dooneyso in aad dibadda Finland uga guurto mudo labo sano shaqo ama waxbarasho darteed waxaad Xafiiska dal u soo guurista ka codsan kartaa in ogolaanshiyahaada joogitaanka aan lagaala laaban. Codsigu waa mid iska caadi ah laakiin waa in taariikh, saxiix iyo macluumaadkeeda shaqsiyadeed laga helaa. Sidoo kale waa inay ku cadahay mudada aad dibadda joogeyso iyo sababta aad u joogeyso. Codsigaada sidoo kale ku sababee sababta aan lagaala laabaneyn ogolaanshiyahaada joogitaanka. Waa inaad sameysaa codsiga ka hor inta aadan dibadda joogin labo sano.
Haddii shaqo bixiyahaada Finnishka ah uu dibadda kuu diro si aad uga soo shaqeyso, ma weyneysid ogolaanshiyahaada joogitaanka Finland haddii xitaa aad dibadda ka shaqeyneyso wax ka badan labo sano.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan u guurista dibadda waxay ku jiraan bogga InfoFinlandi Dibadda uga guurista Finland.
Haddii ad haysato sharci muddadiisu cayimantahay oo ku salaysan qoysnimo, guur ama xidhiidh lamaane oo la diwaangaliyay, guurkaaga ama xidhiidhkaaga lammaane oo joogsadaa wuxuu saamayn karaa sharcigaaga. Dhimashada ku timaada xubinta qoyskaada xitta waxay saameyn ku yeelan kartaa sharciga deganaanshaha, haddii uu ahaa qofka qoyska keenay Finland.
Haddii qoysnimadu aynan jirin, waxa macquul ah sharciga qoysnimada lagu bixiyay in aan la sii wadin. Waxa sidoo kale macquul ah in sharciga lagaala noqdo.
Hase ahaatee sharciga waa laguu sii wadi karaa, haddii xidhiidh adag ad ku leedahay Finland. Xidhiidhada adag ee la yeelan karo waxay kala yihiin:
Carruur ama xubno kale oo qoyskaaga ka tirsan oo jooga Finland
shaqo ama shirkad ad ku leedahay Finland
boos waxbarasho oo ad ku haysato Finland
Haddii lammaanahaaga ad ku kala tagtaan iyada ama isaga oo ah qof kuu gacanqaada, sharcigaaga waa laguu wadi karaa xataa haddii ad kala tagtaan. Caddayn ka keen arrinkaas, tusaale ahaan caddayn dhakhtar ama warbixin ad ka keentay bayaanka rugta la-talinta qoyska.
Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan dhamaanshiyaha guurka ama xiriirka lamaanaha ee diiwaangashan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Guurka.
Haddii aad shaqaada weyso
Haddii aad heysato ogolaanshiyaha joogitaanka ee shaqada oo quseysa oo kali ah u shaqeynta shaqo bixiya cayiman islamarkaasna aad shaqaadi weyso waa in aad gebi ahaanba ogolaanshiyaha joogitaan shaqaalaha oo cusub aad codsataa ama sababo kale aad ku codsataa ogolaanshiyaha joogitaanka.
Haddii Xafiiska dal u soo guurista uu horay kuu siiyay ogolaanshiyaha joogitaanka shaqaalaha xiriirkaadi shaqana uu dhamaaday ka hor inta aysan dhicin ogolaanshiyahaada joogitaanka waa in adiga ama shaqo bixiyahaadu uu Xafiiska dal u soo guurista qoraal ku ogeysiiyaa in xiriirki shaqo uu dhamaaday.
Haddii ogolaanshiyaahada joogitaanka shaqaalaha uusan hal shaqo ku xadeysneyn islamarkaasna aadan hal shaqo bixiye ku koobneyn ee laguugu siiyay uun xirfad cayiman ogolaanshiyahaadina uu shaqeynayo waxaad bedelan kartaa meeshii aad ka shaqeyneysa adigoo isla xirfaddi ku dhex jira.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada iyo Finland uga shaqeynta sidii shirkadle oo kale waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Shaqada iyo ganacsiga. Macluumaadka ogolaanshiyaha joogitaanka shaqaalaha iyo shirkadlaha waxaad ka heleysaa bogga Shaqo u imaanshaha Finland iyo Ganacsade ahaan u imaanshaha Finland.
Haddii aad horay u heysatay ogolaanshaha joogitaanka Finland, laakiin aan laguu ogolaanin ogolaanshiyaha sii-socda, Hoggaanka socdaalka ayaa gaaraya go’aan masaafurin ah.
Haddii aad dembi ku gasho Finland, iyadoo lagu saleynayo dembiga ayaa dalka lagaa masaafurin karaa.
Haddii dalka lagaa masaafuriyo, sharcigaaga laga yaabo in uu shaqeynayo wuu burayaa waana in aad dalka ka baxdaa. Sida caadiga ah waxaa lagu siinayaa wakhti cayiman oo inta lagu jiro ay tahay in aad dalka uga baxdo.
Haddii aadan dalka ugu bixin mudada cayiman ee lagu qabtay dhexdeeda, booliska ama Hay’adda ilaalada xuduudaha ayaa dalka kaa saaraya.
Sida uu sharcigu qabo dalka lagaama masaafurinayo haddi wadankaada aad kala kulmeyso ciqaab dil ah, jirdil, cadaadin ama habdhaqan kale oo bani’aadminimada ka baxsan ama qiimaha bani’aadmiga dhaawacaya.
Dib u celinta iyo masaafurintaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 30.03.2021 Boggan war-celin ka soo dir